अटाे दुर्घटनामा दुईको मृत्यु
धनकुटा । धनकुटाको छथर जोरपाटि गाउँपालिका २ मा आइतवार मध्यान्ह भएको सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । हिलेबाट सिधुवातर्फ जाँदै गरेको को २ ह ६६११ को अटो विपरित दिशाबाट आइरहेको को१ ख ६९१२ को लो प्याट गाडीमा ठोक्किएर...
२४ वर्षीय केटा र १९ वर्षीया केटीको विवाहमा प्रहरीद्वारा रोक !
जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा ५ जुवाडे पक्राउ
बेवारिसे अवस्थामा रहेको १ थान भरुवा बन्दुक बरामद
बर्दिया । मंगलबार दिउँसो गुलरिया नगरपालिका १२ भवानी सामुदायिक वनबाट बेवारिसे अवस्थामा रहेको १ थान भरुवा बन्दुक प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रहरी चौकी गणेशपुरबाट खटिएको प्रहरीले उक्त बन्दुक फेला पारी बरामद गरेको हो । बैतडी, दशरथचन्द नगरपालिका २ ग्वाल्लेकस्थित...
मकवानपुर । गढी गाउँपालिका ४ बन्दडाँडास्थित सडकमा बा४ख ३६५५ नम्बरको टिपरको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ । फरार टिपर चालकको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । यसैगरी मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका ९ स्थित सडकमा ना४२प ७५०६ नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी...
काठमाडौंमा आजको तापक्रम यो बर्षकै न्यून
काठमाडाैं । हिउँदयाम बढ्दै जाँदा काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम भने घटेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज बिहान काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम ४ दशमलव ४ डिग्री मापन गरेको छ। काठमाडौंमा आज बिहानको तापक्रम यो बर्षकै न्यून हो । बुधबारसम्म चिसो झनै बढ्ने महाशाखाले...
वृद्ध आश्रमका ४५ जना वृद्धवृद्धाहरुलाई न्यानो कपड़ा र खाद्यान्न वितरण
लोकसंवाद संवाददाता, मंसिर २२, २०७६
गुल्मी । रुरु क्षेत्र गाउँपालिका१ रिडीस्थित वृद्ध आश्रममा बस्दै आएका ४५ जना वृद्धवृद्धाहरुलाई आइतबार न्यानो कपड़ा र खाद्यान्न वितरण गरिएको छ । गुल्मीको रुरुक्षेत्र रिडी आश्रममा रहेका वृद्धवृद्धाहरुलाई चिन्तामणि भुसाल निमकला प्रतिष्ठानले न्यानो कपडा र खाद्यान्न वितरण गरेको हो ।...
अटो दुर्घटनामा मृत्यु भएका पाँचै जनाको सनाखत
चितवन । राप्ती नगरपालिका५ मा शनिबार साँझ भएको अटो दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने पाँचै जनाको सनाखत भएको छ । एक गम्भीर घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार मृत्यु हुनेमा पर्वतको कुश्मा नगरपालिका पिपलटारी स्थायी ठेगाना भई हाल...
देउसीभैलो खेलेर सङ्कलित रकमबाट फोहर जलाउन मिल्ने डस्टबिन वितरणा
फिदिम । बढ्दो वातावरण प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न फिदिम नगरपालिका४ स्थित हेंवाघाटमा फोहर जलाउन मिल्ने डस्टबिन राखिएको छ । ग्रिन इन्टरनेशनल क्लब पाँचथरले रु ६८ हजारको लागतमा उक्त डस्टबिन राखेको हो । जलाउन मिल्ने फोहरसमेत जथाभावी फाल्ने तथा खोलामा हाल्ने गर्नाले...
जङ्गली हात्तीले दुः ख दिन थाले पछि , गाँउनै त्रासमा
झापा । झापाको मेचीनगर नगरपालिका१३ स्थित कालीझोडा र १५ नं वडाको ज्यामिरगढीका बासिन्दालाई जङ्गली हात्तीले दुःख दिन थालेको छ । अहिले हात्ती साँझ पर्दा नपर्दै गाउँ पसेर घर भत्काउने, लगाएका अन्नबाली खाइदिने गर्न थालेपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा रातभर नसुती जाग्राम...
चिसो बढ्ने क्रम जारी, उपत्यका लगाएत आसपासका जिल्लाहरुमा हुस्सु
काठमाडौं । उपत्यकासहित देशभर चिसो बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बुधबारको तुलनामा बिहीबार शून्य दशमलव ३ डिग्री तापक्रम घटेर बिहीबार बिहान साढे ६ बजे मापन गरिएको तापक्रम ५.५ डिग्री सेल्सियस छ । त्यसैले बिहीबार बिहान बढी चिसो महसुस भएको छ...
रानीपोखरीको जीर्णोद्धार गरेकामा प्रधानसेनापति थापालाई उपहार
भक्तपुर । नेपाली सेनाको ब्यारेकभित्र रहेको रानीपोखरीको जीर्णोद्धार गर्न नेपाली सेनाले अनुमति दिई सहयोग गरेको भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई कलात्मक मयूर झ्याल उपहार दिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको नेतृत्वमा गएको नगरपालिकाको टोलीले जङ्गी अड्डामा...
सडकमै खाऔँ, सडक रमाऔँ’ भन्ने नाराका साथ, पाेखरामा सडक महोत्सव हुदैं
पाेखरा । सडकमै खाऔँ, सडक रमाऔँ भन्ने नाराका साथ, रेष्टुराँ एण्ड बार एशोसिएशन (रेवान) पोखराको आयोजनामा यही पुस १२ देखि १६ गते (डिसेम्बर २८ देखि जनवरी १ तारेख) सम्म २१ औँ संस्करणको पोखरा सडक महोत्सव हुने भएको छ । नयाँ...
सत्र वर्षदेखि बन्द रहेको प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा
नेपालगञ्ज । सत्र वर्षदेखि बन्द रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका१४ महेन्द्रनगरस्थित ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । प्रशिक्षण केन्द्रको प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रत्यक्ष चासो देखाएपछि सञ्चालनमा आएको केन्द्रका निमित्त निर्देशक चण्डीलाल चौधरीले बताउनुभयो । साविकको मध्य तथा...
महोत्तरीमा पिकअप भ्यान दुर्घटना दुईको मृत्यु १५ घाइते
धनुषा । महोत्तरीको बर्दिवासमा आज विहान पिकअप भ्यान दुर्घटनामा परी २ जनाको मृत्यु भएको छ। बाराको गढीमाइ मेला दर्शन गरेर जनकपुर फर्कने क्रममा ना ५ च १२२७ नम्बरको पिकअप भ्यान अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा धनुषाधाम २ का...
गढीमाईलाई र जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न माग
बारा । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश नं २ कमिटीका अध्यक्ष प्रभु साहले बाराको गढीमाईलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । ऐतिहासिक गढीमाई क्षेत्रलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत...
चिनी मिलले नै उखुको मूल्य तोक्ने !
कञ्चनपुर ।बेलौरी नगरपालिकाको शिवनगरमा रहेको महाकाली चिनी मिलले उखुको मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको छ । चिनी मिल सञ्चालक र उखु उत्पादक किसान हक हित संरक्षण समितिबीचको सहमतिमा उखुको मूल्य तोकिएको हो । सहमतिअनुसार अर्लि जातको उखुको मूल्यप्रति क्वीन्टल ४४० रुपयाँ,...
बागलुङकाे कोप्चेमा जीप दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु
बागलुङ । गुल्मीको इस्माबाट कुलपूजाका लागि बागलुङको निसिखोला आउँदै गरेको ग१ज ५२१९ नंको जीप दुर्घटना हुँदा १४ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा ३ जना घाइते भएको र एक जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।...
टिप्परको ठक्करबाट विककोे मृत्यु
भक्तपुर । मध्यपुर ठिमिको राधेराधेबाट भक्तपुर नगरपालिका१ सल्लाघारीतर्फको सर्भिस ट्र्याकमा टिप्परले ठक्कर दिँदा पैदल यात्री उदयपुर चौदण्डीगढी नगरपालिका घर भएका २७ वर्षीय समीर विकको मृत्यु भएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलले टिप्परले ठक्कर दिई घाइते...
भोजपुर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बालागुरु षडानन्द अधिकारीलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिने बताउनुभएको छ । बालागुरुको १८५ औं जन्मजयन्ती मनाउन आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले षडानन्दको योगदानलाई कदर गर्दै राज्यले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।...